सामान ओसारपसार गरिदिने व्यवसाय, दिनमै ४०,००० को आम्दानी!
तपाईँलाई कुनै सामान अथवा कागजपत्र एकबाट अर्को ठाउँमा पठाउनुपर्‍यो भने कसरी पठाउनुहुन्छ? वा भनौँ साथीलाई उपहार पठाउनु पर्‍यो तर साथीको बसाई निकै टाढा छ। टाढा हुँदा सन्देश पुर्‍याउन सजिलै सकिने प्रविधिको त विकास भयो तर नेपालमा सामान आदानप्रदान गर्नको निम्ति भने सन्तोषजनक समाधान अझै आउन सकेको छैन। लामो समय देखि नेपालमा यस्तो कामको जिम्मा कुरियर कम्पनीहरूले लिँदै आएका छन्। यद्दपी यस्ता कम्पनीहरूबाट सामान पठाउँदा वा प्राप्त गर्दा धेरै समय लाग्ने, सामान नपुग्ने, महँगो हुने जस्ता समस्याहरू धेरैलाई महसुस हुने गरेको भेटिन्छ। त्यस्तै ‘पठाएको सामान सकुशल पुग्ला त?’ भन्ने शङ्का पनि धेरैलाई मनमा परिरहने हुनसक्छ।
अहिले ५० कर्मचारीहरूका साथ उनीहरू देशका ३५ विभिन्न सहरहरूमा आफ्ना सेवाहरू दिँदै आएका छन्। कर्मचारीहरू मध्ये रात (९-१० बजे) सम्म काम गर्ने ३ जना कर्मचारीहरू पनि रहेका छन्। उनीहरूलाई बस्नका लागि अफिसमा नै कोठा दिइएको छ। काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा, चितवन, राजविराज, बिर्तामोड, हेटौंडा र बुटवल गरी ८ वटा जिल्लाहरूमा उनीहरूले आफ्नो कम्पनीको शाखा खोलेका छन्। उनीहरू सामान लिन ग्राहकको घरमै जाने गरेका छन्। बोलाएको ठाउँमा पुग्नका लागि छुट्टै कर्मचारीहरू राखिएका छन्। उनीहरू मोटरमा सामान लिन जान्छन्। सामान ल्याएर एउटा कोठामा जम्मा गर्छन् र उपत्यका भित्र हो भने मोटरमा र बाहिर हो भने हवाईजहाजमार्फत सामानहरू पुर्याउछन्। यस कामका लागि लाग्ने मोटर र खाना खर्च अफिसले नै दिने गरेको छ। सामान्यतया उनीहरूले १ देखि ५ के.जी सम्मका सामानहरू ल्याउने पुर्‍याउने गरेका छन्। उनीहरूले उपत्यका भित्र वा रिंगरोड देखि ४ किलोमिटर भित्र हो भने ८५ रुपैयाँमा सेवा दिँदै आएका छन्। त्यस्तै ४ किलोमिटर भन्दा बढी भएमा १०५ रुपैयाँमा नै पुर्‍याउने गरेका छन्। धेरै सामान पुर्‍याउनु पर्ने छ भने छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसै गरी भर्खर सुरु गरेको कम्पनीहरूसँग कारोबार गर्दा पनि छुट दिने गरेको दिवस बताउँछन्। मार्केटिङका लागि उनीहरूले फेसबुक पेज पनि बनाए। पेजमार्फत उनीहरूले छोटो समयमै थुप्रै ग्राहकहरू बनाउन सके। उनीहरूले मार्केटिङका लागि धेरै दुख पनि गर्नु परेन। राम्रो र सस्तो भएका कारण नै होला फास्ट मुभर्स छोटो समयमा नै चर्चित हुन पुग्यो।